'गुगलदेखी रिस उठेको छ ? यसरी तोडफोड गर्नुस्' | मेरो कलम
‘गुगलदेखी रिस उठेको छ ? यसरी तोडफोड गर्नुस्’
Nepali May 21, 2013
– कहिल्यकाहि खोजेको कुरा ठ्याक्कै नभेट्दा गुगल देखी नै रिस उठेको होला हैन ? अहिल्य त रिस सेलाईसकेको पनी हुनसक्छ । त्यसो भए रिसलाई फेरी जगाउनुस् र लाग्नुस् गुगल तोडफोड गर्न । तपाईले साच्चै गुगल तोडफोड गर्न सक्नुहुन्छ । भताभुङ्ग नै वनाउन सक्नुहुन्छ । त्यो सम्भव छ । मैले यसरी भत्काईदिए गुगललाई ।
मेरो कम्प्युटरमा त गुगल ठिकै छ भन्ने सोचिरहनुभएको होला । छक्क नपर्नुस् Google Gravity को कुरा गर्दैछु । तपाईले गुगल सर्च ईन्जिनको होम पेजमा देख्दै आउनुभएको मेनुहरु विगारेर रैमठ्ठ पार्न सक्नुहुन्छ । मेनुहरुलाई टिप्दै मिल्काउन सक्नुहुन्छ र खेलको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ, यो रमाईलो खेल हो । पहिलो चोटी खेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई निकै रमाईलो लाग्न सक्छ । पहिल्यै थाहा थियो र खेल्दै आएको हो भने चै ईन्द्रको अगाडी स्वर्गको वयान पनी लाग्न सक्छ ।
~ गुगल सर्च ईन्जिनमा जानुस् ,
~ Google Gravity टाईप गर्नुस्
~ र I am feeling lucky पनी सगै टाईप गर्नुस् ।
~ वा यहाँ क्लिक गर्दा पनी हुन्छ ।
ले हेर्नुस् तपाईले सर्च गर्ने गुगलको आकार प्रकार कस्तो भयो ? कुनै विषयमा सर्च गरेर पनी हेर्नुस्, हरेक मेनुलाई टिप्दै मिल्काउनुस् । तपाई गुगल सर्च ईन्जिन विगार्न सफल हुनुभयो । 🙂
चमत्कारिक गुगल ग्लास (Google Glass)
Nepali March 20, 2013
ओहो ! ‘जिमेलको ईमेल डिलिट भईहाल्यो नी’
Nepali February 5, 2015
‘मान्छे हैन टेक्नोलोजी पो स्मार्ट हुन्छ त’
Nepali May 10, 2013
आखाँकै ईसारामा चल्छ Samsung Galaxy-S4
Nepali May 8, 2013
Milan Neupane May 21, 2013 Log in to Reply
dami idea po raicha ta ho
Smooth Heart May 21, 2013 Log in to Reply
यो तरिका एकदम रमाइलो छ ,नेट मा बस्दा बस्दा अल्छी लागेको बेला यस्तो गर्दा रमाइलो नै हुन्छ 🙂 /// यस्तै अन्य टिप्स तथा तरिका हरु थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोला
Shiva June 7, 2013 Log in to Reply
so cool….hahaha !
Google laai bhatkaun paaunda sancchai nai ramaailo lagyo….